लकडाउनमा घरमै खुसी र स्वस्थ रहन शारीरिक अभ्यास अनिवार्य - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
- डा. हुल्सा पौडेल
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको समयमा घरमै बसेर शारीरिक रूपमा सक्रिय जीवनशैली अपनाउनु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । सक्रिय जीवनशैली नअपनाउँदा विभिन्न किसिमका रोगको सिकार हुनु पर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो बेला आफूलाई स्वस्थ राख्न के गर्ने ?
सामाजिक दुरी कायम गरेर हामी शारीरिक अभ्यासहरू गरेर स्वस्थ रहन सक्छौँ । शारीरिक रूपमा सक्रिय रहने अभ्यास गर्ने धेरै तरिकाहरू छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले समेत प्रति हप्ता १५०–३०० मिनेट मध्यम, गहन र मांसपेशीलाई सुदृढ पार्ने शारीरिक अभ्यास गर्न सिफारिस गरेको छ । हप्तामा कम्तीमा २ दिन यस्तो अभ्यास गर्नु आवश्यक छ । सक्रिय रहनु हाम्रो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यहाँ शारीरिक रूपमा स्वस्थ रहन गरिने केही व्यायामका विधिहरू दिइएका छन् ।
याे तस्बिर अनुसार व्यायाम गर्नुहाेस
कोरोना भाइरसको महामारीका बिचमा खुसी र स्वस्थ रहन बलियो प्रशिक्षण वा प्रतिरोध तालिम कुनै पनि फिटनेस रुटिनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । बलियो प्रशिक्षण तौल बिना, मेसिन बिना, पनि गर्न सकिन्छ ।
तस्बिर २ अनुसार व्यायाम गर्नुहाेस
आफ्नो शरीरको लागि जहिल्यै ध्यान दिनुहोस् । माथि उल्लेख गरेका कसरत र व्यायाम आधा घण्टा मात्र गरे पनि तपाइको शरीर र मस्तिष्क स्वस्थ रहन्छन् ।
यहाँ तपाईँको मनमा उत्पन्न हुने जिज्ञासा र तिनका उत्तरहरू दिइएका छन् । तिनलाई मनन गर्नुहोस् ।
हो सक्नुहुन्छ । मध्यम तथा तीव्रता व्यायाम गर्दा तनाव कम हुनुका साथै तपाईँको ऊर्जाको स्तर सुधार हुन्छ । यसले रोग प्रतिरोधात्मकता बढाउन मद्दत गर्दछ । तर, असुरक्षित उच्च, तीव्रता उच्च खालको व्यायाम प्रशिक्षकको निगरानीबिना गर्दा तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दबाउन सक्छ । त्यसैले तपाईँको शरीरले धान्ने मात्र व्यायाम गर्नुहोस् । व्यायाम गर्दा तपाईँलाई सजिलो महसुस हुनुपर्छ ।
● म क्वारेन्टाइन भित्र छु, तर सङ्क्रमित छैन । के मैले शारीरिक गतिविधि सीमित गर्नु पर्दछ ?
यदि तपाईँसँग रोगको कुनै लक्षण छैन भने पनि यस्तो बेला शारीरिक गतिविधि नगरेर निष्क्रिय बस्नु हुँदैन । तपाईँलाई खोकी, ज्वरो आएको छ वा सास फेर्न गाह्रो भएको छ भने स्वास्थ्यकर्मीसँग सल्लाह भने लिइहाल्नु पर्छ ।
● म सङ्क्रमित भएर क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छु । के मैले शारीरिक गतिविधि सीमित गर्नु पर्दछ ?
यदि तपाईँ सङ्क्रमित तर एसिम्प्टोमेटिक हुनुहुन्छ भने तपाईँले सङ्क्रमण देखिनुअघि गर्दै आएको शारीरिक व्यायामलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । यस समय तपाईँ क्वारेन्टाइनमा बस्नु आवश्यक छ । अरूलाई भाइरस फैलाउनबाट रोक्न तपाईँले अरूसँग दुरी कायम गर्नु पर्दछ । यद्यपि तपाईँलाई खोकी, ज्वरो वा सास फेर्न गाह्रो भए शारीरिक गतिविधिलाई बन्द गर्नुहोस् । स्वास्थ्यकर्मीसँग तुरुन्तै सल्लाह लिनुहोस् ।
● यस्तो बेला हामी एक अर्कालाई सहयोग गर्न के गर्न सक्छौँ ?
प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय रहँदा सामाजिक रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । हरेकले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु पर्छ । ती भूमिकाहरू हुन्
सामाजिक दुरी कायम गरेर शारीरिक अभ्यास गर्दै घरमा रहनुस् ।
प्रत्येक पटक कुनै उपकरण प्रयोग गर्नुअघि र पछि कीटाणुनाशक (स्यानिटाइजर) प्रयोग गरेर निर्मलीकरण गर्नुहोस् ।